कस्ता छन् नयाँ प्रधानन्यायाधिश पराजुली? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कस्ता छन् नयाँ प्रधानन्यायाधिश पराजुली?
विवादका विषयमा पराजुलीले भनेः हिजोका कुरा छोडिदिऊँ
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिशका रुपमा सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदा हिजो गोेपाल पराजुली जति हंसमुख र आश्वस्त देखिएका थिए, त्यो भन्दा बढी आज सपथग्रहणमा विश्वस्त र चपल देखिए। त्यति मात्र होइन, पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफ्ना विषयमा विगतमा उठेका, उठाइएका विवादका विषयमा स्पष्ट बोले, ‘कसले के प्रकाशन गर्यो, कसले के गर्यो हिजोको कुरा छोडिदिऊँ। म पारदर्शी, एकदम उदार दिलको र कही कुनै ठाउँमा आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नहुने र उत्तरदायीपूर्ण काम गर्छु।’
न्यायवृत्तमा पराजुलीलाई न्यायको मर्म पक्डिन सक्ने न्यायमूर्ती मानिन्छ। उनी कानुनका दफा केलाउन र त्यसलाई आयामिक रुपमा व्याख्या गर्न माहिर मानिन्छन्। यद्यपी उनले प्रधानन्यायाधिशको पदावधी बढाउन नागरिकता सच्याएको आरोप झेले। उनका कतिपय फैसला पनि विवादित भए। खासगरी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने पराजुलीको बेन्चले गरेको फैसला शंकास्पद थियो भनेर उनका आलोचकहरुले बताउँछन्।
सवल र दुर्वल पक्षहरु आफ्ना ठाउँमा छन् तर यो बीचमा सर्वोच्चभित्र जाँनिदो–नजानिँदो शक्ती–संघर्षसँग पराजुलीले लडे। पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीसँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो थिएन। कार्कीको इमान्दारिता र निष्ठामाथि प्रश्न नउठे पनि उनको पालामा सरकार, संसदसँग सर्वोच्चको सम्बन्ध डगमगायो।
तत्कालिन न्यायाधिश पराजुलीलाई सवोच्चको सर्वोच्च कुर्चीमा पुग्न नदिन उनीविरुद्ध मुद्दा नै दायर गएिको भनाइ उनका अनन्यहरुको छ। तर जसले रिट दिएको हो उही निवेदक गायब हुने स्थिति पैदा भयो। यसका पछाडि पराजुलीको पहल थियो या सत्यको बल, समयले नै खुलाउला। यत्ति हो कि, तमाम टकरावबीच पनि पराजुलीले झण्डै ११ महिना सर्वोच्चको वागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका छन्।
२०१० वैशाख १६ गते तनहुँको काहुँ शिवपुरमा जन्मिएका पराजुली लामो समयसम्म कानुन व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका थिए। विसं २०४७ मंसिरमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा अदालतमा उनको प्रवेश भएको हो।
सवोच्च छिरेपछि उनको कार्यसम्पादनको गति हेर्ने हो भने पराजुलीले अरु धेरै न्यायाधिशहरुलाई लिलिपुट सावित गर्छन्। सर्वोच्च आएको पहिलो वर्षमै उनले त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले भन्दा १३ गुणा बढी मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ। शर्माले १०० मुद्दा फैसला गर्दा उनले १३६८ मुद्दा छिनेका थिए। त्यसैले होला, सर्वोच्चभित्र उनको कार्य क्षमताको भने राम्रै गुणगान गाइन्छ।
न्यायाधिशका रुपमा जेजस्तो भए पनि अव पराजुलीले राज्यका महत्वपूर्ण तीन अङ्गमध्ये सर्वोच्च अदालतलाई काँधमा राख्नु पर्नेछ। सर्वोच्चको गरीमा भनेको त्यसले प्रवाह गर्ने न्याय सेवा र आर्जन गर्ने विश्वसनियतामा निहित हुन्छ। यसकैका लागि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायाधीशहरुलाई ओभरटाइम गराउने योजना अघि सारेका छन्। भनेका छन्, ‘अतिरिक्त काम गरेर भएपनि जनतालाई सेवा दिन सबै न्यायाधीश लालायित हुनुहुन्छ।’
आग्रह पूर्वाग्रहबाट परिचालित नहुने र आफ्नो उद्देश्यप्रति प्रष्ट रहेको दाबी गर्ने पराजुलीले आफ्ना व्यक्तिगत र ठूला योजना नभएको भन्दै सर्वोच्चमा आफुले व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना अघि सारेको बताएका छन्। भनेका छन् ‘पद्दति र प्रणालीलाई भुलेर ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन।’
प्रकाशित २ साउन २०७४, सोमबार | 2017-07-17 15:06:34